Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Niainga i Tsaradia: Ny zotram-piaramanidina vaovao eto Madagasikara
Ny fampandrosoana lehibe indrindra ny seranam-piaramanidina dia natao teto Madagasikara, taorian'ny fifanarahana fiaraha-miasa teo amin'ny Air Austral of Reunion sy ny Air Madagascar. Tsaradia, zanaky ny zotram-piaramanidina nasionaly vaovao, dia nidina an-danitra tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ary hiasa amin'ny lalana manerana ny nosy mikororosy, mampiasa fiaramanidina fito hanompoana toerana 10 miala an'i Antananarivo.
Hampiasa ATR72's efatra sy DHC Twin Otter efatra i Tsaradia ary antenaina hampiakatra ny fahaizan'ny seza amin'ny sidina anatiny mihoatra ny 50 isan-jato ka hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpandeha. Toerana itodiana dia i Nosy Be, Antsiranana, Toamasina ary Toliara miaraka amina sidina roa isan'andro raha i Saint Marie, Sambava, Mahajanga, Morondava ary Maroantsetra kosa dia homena indray mandeha isan'andro isan'andro.
Fantatra tamin'io fotoana io fa hiara-hiasa akaiky amin'ny EWA Air, sampana iray an'ny Air Austral i Tsaradia, hiantohana ny toeran'i Tsaradia ihany koa ny toeran-kaleha. EWA Air, miorina amin'ny nosy frantsay Mayotte miaraka amin'ny Air Austral izay manana 52.3 isan-jaton'ny fizarana dia miasa eto Madagasikara, manompo an'Antananarivo, Nosy Be, Mahajanga ary Antsiranana.
Source: - Vaovao momba ny fiaramanidina, fitsangatsanganana ary fiarovana - DAILY avy any Afrika Atsinanana sy ny nosy Ranomasimbe Indianina